State Counsellor receives Nigerian Ambassador – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor receives Nigerian Ambassador
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar, received Mr. Ahmed Nuhu Bamalli, Ambassador of Nigeria to Myanmar at 11am on 31 January 2019 at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw.
During the meeting, they cordially discussed and exchanged views on the matters relating to promotion of bilateral relations and cooperation, in areas such as liquefied natural gas production technology, sports sector, culture, film industry and coexistence among diverse ethnic groups.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ဂျီးရီးယား သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၃၁-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ဂျီးရီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli အား ၃၁-၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၁၀ဝ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထို့သို့ တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-နိုင်ဂျီးရီးယား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည် ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ၊ အားကစားကဏ္ဍ၊ ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍ၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနှင့် ကွဲပြားသော လူမျိုးစုမျိုးနွယ်များ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ကဏ္ဍတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။